Iinkonzo ze-Shantui Janeoo iShiheng Canggang yeprojekthi yokwakha uloliwe | Shantui
Iinkonzo zeShantui Janeoo iShiheng Canggang
Kutshanje, iiseti ezintandathu zeSjHZS240-3R indawo yokuxuba ikhonkrithi esetyenziswe yiShantui Janeoo kulwakhiwo lweShiheng-Canggang Intercity Railway sele ifakiwe kwaye yanikezelwa ngempumelelo kubathengi.
Zonke izixhobo zamkela ulwakhiwo lwesamente lwesilayidi, kwaye isixhobo ngasinye sixhotyiswe ngesilili seetoni ezingama-500 njengesisele sokugcina, esonyusa kakhulu ubunzima bokwakha. Ngexesha lokwakha, yayilixesha lemvula, kwaye indawo yayinodaka yonke. Ukuqinisekisa ixesha lokwakha, abasebenzi benkonzo bahlala benxiba iidyasi kunye neebhutsi ukwenza ulwakhiwo emvuleni, beziqhelanisa nenkcubeko yokusebenza "yosuku oluneentsuku ezimbini ezinesiqingatha" ngokwenza izinto ezibonakalayo. Ngemizamo engagungqiyo yabasebenzi beenkonzo, iimveliso zinikezelwe kubathengi ezinomgangatho oqinisekileyo kunye nobungakanani, kwaye bakwimeko entle ngoku.
Kuxelwe ukuba iShiheng-Canggang Intercity Railway ngumgaqo obalulekileyo ekucwangcisweni koololiwe baseBeijing-Tianjin-Hebei. Kubalulekile kulwakhiwo lwamathambo aphambili "athe nkqo kwaye amane athe tyaba" kumgaqo kaloliwe waseBeijing-Tianjin-Hebei, kunye nokuhamba kweeyure enye ukusuka eShijiazhuang, ikomkhulu lePhondo le-Hebei, ukuya kwiidolophu ezinkulu ezingqongileyo. Kubaluleke kakhulu ukuqonda unxibelelwano olukhawulezayo phakathi kwe-mpuma ye-Hebei kunye ne-Tianjin nangaphaya; Ukuhlangabezana neemfuno zotshintsho lwabakhweli kwizixeko needolophu ecaleni kwendlela kunye nokuphucula ukuqokelelwa kwamazibuko kunye nenkqubo yokuhanjiswa.